Xildhibaano maanta booqday degaanno dhowaan laga saaray Al-shabaab. – Kalfadhi
Xildhibaano maanta booqday degaanno dhowaan laga saaray Al-shabaab.
Xildhibaan Barafoor Maxamed Cumar Dalxa iyo Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed iyo Xubno kale ayaa maanta booqday degaanno ku yaala Gobalka Shabeelada Hoose oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha Al-shabaab.
Degaanad ay maanta booqdeen xubnahaan ayaa kala ah Sabiib iyo Caanoole oo qiyaastii 10 KM u jirta degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelada Hoose, halka magaalada Muqdisho uu u jiro 40 KM, waxayna xubnahaan ay la kulmeen dadka degaanka.
Hadal ay ka jeediyeen Shabeelada Hoose ayey mas’uuliyiintaan kaga hadleen ujeedka Socdaalkooda waxayna u mahadceliyeen Ciidamada Milatareiga Soomaaliya ee degaankaasi ka saaray Al-shabaab.
“Farxad ayey noo tahay inaa halkaan nimaano kuna aragno difaacyada hore Ciidamo Soomaaliyeed oo Naftood hurayaal ah” ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed. “in degaankaan la yimaado ma ahan arin sahlan balse Alle ka Sokow waxaa sahlay Ciidamada Qaranka, waana rajaynayaa Al-shabaab inta dhiman laga saari doono” ayuu Warbaahinta u sheegay Xildhibaan Xasan Cali Amardambe oo sidoo kale ah Wasiirka Difaaca Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo sidoo kale katirsan xubnaha laga soo doortay degaanadaasi ayaa sheegay in maanta ay u tahay maalin wayn oo qiima badan maadaama uu joogo degaano uu aad u kala yaqaano Al-shabaabna ay ku xooganaayeen.
“Waa maalin wayn oo qiima badan, waana ku faraxsanahay inaa imaado degaankii layga soo doortay oo xor ah, Cadowgiina laga saaray” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa. “Dadka degaanka waxaan ka dalbanayaa in ay taageeraan Ciidamada difaaca, ma noqon doono waan sii socon doonaa ilaa dalka oo dhan, Gobalkaanna Al-shabaab waa laga saarayaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Maxamed Cumar Dalxa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Degaanada Sabiib iyo Caanoole oo ay dhowaan la wareegayn Ciidamada difaaca Soomaaliya ayaa sidaan oo kale hore waxaa dhowr jeer booqasho ku tagay Saraakiil iyo Madaxweynaha Soomaaliya. Waa markii ugu horreysay oo ay Xildhibaano degaankaan booqdaan.
Xildhibaan Farxiyo oo u jeedisay haweenka Puntland in ay dowlad-goboleedyada kale la wadaagaan sida ay u mideeyeen dadkooda
Xildhibaan Canab Cilmi oo haweenka u jeedisay in ay raadiyaan in dalku gaaro hannaan dimuqraadi ah